Ireo mpampihorohoro Kiorda eo ambanin'ny fantsom-bokatra mavokely no nilaza an'i Frantsa hoe: Erdogan: Martin Vrijland
Ireo mpampihorohoro Kiorda eo ambanin'ny fantsom-bokatra mavomavo fanoherana an'i Frantsa dia niteny hoe Erdogan
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 9 Janoary 2019	• 6 Comments
Ny tsara tarihin'ny fisehon'ny tamin'ny lalana "ordo AB Chao" tany Eoropa, voalohany korontana Efa voalahatra dia mamela ny Tiorka tsehatra, toa hita bebe kokoa foana ho an'ireo izay mahalala ny hijery ny alalan 'ny setroka efijery. Mazava ho azy fa izany no faminaniana feno fahasahiana, izay taona maromaro mazàna hatao, fa Torkia ankehitriny mampiseho ny famantarana ny Alemaina tamin'ny fiandohan'ny '30 tamin'ny taonjato farany. Tsy ny Italiana ihany no popolista governemanta manohitra ny EU ny fihetsiketsehana mavo mavo nanohana mivantana, noho ny tsy fankasitrahan'ny governemantan'i Macron, fa ny filoha Tiorka Erdogan koa dia manambara fa misy ny Kurdish terrorists dia eo ambanin'ny volo mavo. Ny antony mahatonga ny olona iray hiaraka amin'ny iray hafa dia mitaky fanazavana sasantsasany.
Ny hetsika fanoherana ny EU dia toa mampitaha amin'ny fiakaran'ny fifidianana sy ny fifidianana ny filoha amerikana Trump. Ny populism ankavanana dia afaka mahazo ny fanohanana amin'ny Etazonia sy ny Vondrona Eoropeana. Andao hanao izany ny sehatra hery manohitra ny foibe miantso. Ny hetsiky Brexit koa dia tafiditra amin'io sehatra hery io. Tafika hery izay mifamatotra amin'ny 'hevitry ny conspiracy', izay fanakianana ny filaminana niorina mifandray amin'ny lazaina bahoaka. Tany Holandy, ireo antoko mpanohitra antoko mpanohitra PVV sy FvD dia niorina ho amin'izany antony izany, tarihan'i Geert Wilders sy Thierry Baudet. Izany rehetra izany dia tsy maintsy mitarika amin'ny hetsika onjam-peo araka ny hitantsika eo ambanin'ny Trump. Aoka isika hiantso an'io 'fanindrahindrana' (sy noho izany fanoherana ny fanatontoloana izany) ho tombontsoany. Ny mety ho tsara kokoa noho ny fihenan'ny onjampeo dia hitarika ho amin'ny fihenan'ny ara-toe-karena tsy ho ela. Amin'izany, ity antokon'olom-bolo ity dia hantsoina ho anton'ny korontana, any Etazonia sy Eoropa. Avy amin'io korontana io dia azonao atao ny mametraka ny filaminana sy mamaritra amin'ny endriny rehetra amin'ny endrika fanakianana sy ny faniriana rehetra hanapa-kevitra. Toa ho toy ny andraikitra ho an'i Erdogan izany.
In ity lahatsoratra ity Nanoratra aho fa ny fikasana dia toa hoe ny herin'ny fanjakana amerikana dia hikorontana ary ny hery avy amin'ny Fanjakana Ottoman dia tokony hitsangana indray. Eo an-dalam-pandrosoan'ny tondrozotra mankany amin'ny korontana isika izao. Eny, io tokoa ilay lalao indray Olana, fihetsika, vahaolana. Ny hetsiky ny jiro mavokely ary ny fitomboan'ny antoko politika populista dia voatondro ho antony mahatonga ny korontana ara-sosialy sy ara-toekarena. Raha afaka manolotra ny alibi ihany koa ny mpampihorohoro fa mifangaro amin'ny hetsi-panoherana i Erdogan, izany dia antony iray hafa amin'ny fidirana an-tsehatra. Afaka mametraka ny tenany ho mpamonjy an'i Frantsa sy firenena hafa i Erdogan ka mety tsy hanana fahefana intsony ny governemanta ankehitriny. Angamba, ohatra, izy "dia tokony hiditra an-tsehatra" any Italia; izay ahafahany manao asa fanavotana ny firaisan-kinan'ny eoropeanina amin'ny alàlan'ny famoahana ireo vahoaka populista manohitra ny EU avy amin'ny fahefany.
Mazava ho azy fa haka fotoana kely izany, satria tsy ampy ny korontana, fa hita mazava tsara ny famantarana. Ny fianjerana ara-toekarena (angamba amin'ny fotoana fohy) dia afaka manome ny farany hanosika ny korontana.
Ankehitriny, ilay mpamaky mahagaga, izay mety hahatonga ity fahitana vaovao ity, dia mety hanontany tena hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahanao mihevitra fa afaka mandray an'i Eoropa i Torkia? "Vorontsiloza? Tsy izany ve no fandehanana fialan-tsasatra mahafinaritra, izay vao haingana ny vola?"
Raha mbola mijery ny milamindamina fantsona ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny na ny isan'andro Telegraph fihinanana sy ny haino aman-jery hafa pulp sidintsidina, ianao variana amin'ny fampielezan-kevitra ka noho izany mety tsy ho fantany ny fitomboana mahery ao Torkia. Tsy vitan'ny Erdogan sahirana no mampifandray ny firenena silamo, dia efa nanao miaramila be indostria sy Torkia ao amin'io sehatra io ho lasa mahaleo tena kokoa. Efa nahatratra ny teboka i Torkia izay ahafahany mamokatra fitaovam-piadiana rehetra ho an'ny ady. Ankoatra izany, dia manana tafika lehibe Mega vonona, na dia voaporofo tany amin'ny faritra avaratr'i Syria koa ny antokon'ny miaramila mitondra mora foana Amerikana (izay manohana ny Kiorda YPG) mitondra fiara izy. Miresaka momba ny tafika iray izay afaka manapaka an'i Frantsa amin'ny iray andro. Torkia no tafika faharoa lehibe indrindra tao anatin'ny OTAN nandritra ny taona maro; Ny OTAN izay maty aorian'ny fahafatesana (noho ny tsy fifanarahana eo amin'ny Etazonia sy Torkia), saingy misy ihany amin'ny taratasy.
Raha ny hevitro, fotoana maromaro mialohan'ny handosiran'ny sainan'i Tiorka any Bruxelles. Ary matoky tsara fa ny fanomanana an'io fiaraha-miasa io dia efa noraisin'ireo mpitondra ankehitriny. Izy ireo no fototry ny korontana ho avy. Angela Merkel, ohatra, dia nandray anjara lehibe tao anatin'ity dingana ity, miaraka amin'ny politikan'ny mpitsoa-ponenana. Fantatsika rehetra fa misy fifandraisana ara-tantara eo amin'i Tiorkia sy Alemana. Ity tarika ity dia nanjary hita tamin'ny Ady Voalohany tamin'ny Ady Lehibe ary tsy ela dia ho tonga indray ny tany. Aza manantena ny fampahalalam-baovao haneho anao ity sary ity. Ny haino aman-jery dia eo am-panoratana ny raharaha ary manakana anao ho jamba amin'ny zavatra mitranga. Ny haino aman-jery hafa dia mifantoka amin'ny 911, UFOs ary ny ady miady amin'i Rosia na Shina. Izany no mahavariana. Ilay mpanao majika dia mitarika anao amin'ny alalan'ny fandaharana amin'ny fampielezam-peo sy ny lahatsoratra fampielezan-kevitra, izay "manam-pahaizana" milaza aminao ny toerana tokony hijerena azy, mba tsy hahatonga ny trosa mahagaga hanalavitra ny saha misy anao. Efa mandray lesona tiorka ve ianao?
Miaraha amin'ity tranokala ity ary ampio ny asako.
Lisitry ny rohy loharano: trouw.nl, telegraph.co.uk, rt.com
Hifarana avy any amin'ny Vondrona Eorôpeana i Friesland: hahatonga an'i Fryslân ho lehibe!
FAHAFAHANA ho fampihorohoroana any Eoropa ve ny fatiantoka any Syria sy Iraka?
Ny fananihan'i Torkia an'i Syria: Miezaka manohitra ireo mpikomy izay manohana ny mpikambana ao amin'ny OTAN ny mpikambana ao amin'ny OTAN
Ny toekarena Tiorka dia tsy hijaly amin'ny faneriterena vahiny amin'ny teny Tiorka
Tags: tsy tia, Erdogan, EU, Featured, gele, palitao, Kiorda, Kurdish, Fanjakana Ottoman, populism, populist, mpampihorohoro, vorontsiloza, VS
9 Janoary 2019 ao amin'ny 14: 46
Hazo manify mihaja?
12 Janoary 2019 ao amin'ny 11: 15
Mandehana milalao mba tsy hisy olona hahalala ...
Mariho ireo fifanarahana vaovao momba an'i Tiorkia (tafiditra ao anatin'izany ny hery atomika Pakistan)
9 Janoary 2019 ao amin'ny 15: 46
Heverinao fa ny faritra ara-politika sy ara-toe-karen'i Torkia dia ao atsinanan'ny faritra (Eurasian), inona no tsy maintsy horaisin'ny Torkia any amin'ny Tandrefana? Izay tena izy dia asa be tokoa satria i Torkia dia tena mizarazara. Tsy maintsy tadidinao fa vondrona foko maro i Tiorkia miaraka amin'ny fandaharam-potoanany manokana.
9 Janoary 2019 ao amin'ny 19: 01
Izay nolazaiko tao amin'ny lahatsoratra teo aloha: tsy misy ifandraisany amin'ny lojika ny script.
averhoeve nanoratra hoe:
11 Janoary 2019 ao amin'ny 09: 40
Soso-kevitra: Aza manangona vola araka ny fangatahana 'Yellow Hesjes'. Koa hametraka olana amin'ny banky raha toa ka manangona vola ny tsirairay (= banky).
Mety hiteraka olana ho an'ny banky izany, saingy izany no tadiavin'ny TPTB! Ohatra, izy ireo dia afaka manolo vola fiat amin'ny vola dizitaly (satria, izy ireo dia hilaza, ho azo antoka kokoa ho an'ny rafitra ary ho azo antoka kokoa). Ny zavatra rehetra dia ny fanaraha-maso ny tovolahy. Ny fifanakalozam-bola amin'ny fiat money dia tsy voamarina kokoa noho ny fivarotana dizitaly.
Jereo ny 'Digital Phoenix' vola efa efa nandroso 30 taona lasa izay mba hanomboka hampiasa 2019 !!!
12 Janoary 2019 ao amin'ny 09: 39
« Fanehoan-kevitry ny lehilahy sy ny sonia SGP mpitarika ny Van der Staaij eo ambany fanambaran'i Nashville: fampielezan-kevitra avana amin'ny avana
Tratra ny sisin-damban'ny tromp, mandrehitra ireo Amerikana mandositra rehefa ravana ny toekarena? »